Home » Community & Society » . လော်ဘီ တဲ့လား … လွယ်တာလိုက်လို့ကွယ် …
ပြောချင်တာတွေ များးပြီးး ဖျက်လိုက်ရတယ်…
အဲလိူမှောင်နေဖို့.. လျှပ်စစ်မီးနဲ့.. လျှပ်စစ်မီးထွက်တဲ့ဟာတွေအကုန်.. အင်ဖရာတွေ.. မလုပ်နိုင်အောင်ဆန္ဒပြ..ဖြုတ်ချနိုင်မှဖြစ်သဗျ…။
ဒေါ်စုက..မြစ်ဆုံဆည်ကို.. ကျေက်မီးသွေးလျှပ်စစ်အားစက်ရုံတွေကို.. သံလွင်ဆည်စီမံကိန်းတွေကို.. ဘယ်လိုကိုင်တွယ်မလဲ…. သိချင်…သိချင်..။
မြန်မာပြည်မှာတော့ ဆန္ဒပြပွဲ အတုတွေ လုပ်ပွဲတွေလဲရှိနေတာအမှန်ပါဘဲ
.တိုင်းရေးပြည်ရေးကတော့ ရှုပ်ထွေးပီးရင်း ရှုပ်ထွေးရင်းပါပဲ
.ကျေးဇူးပါ လော်ဘီမြ :))
ရွာကိုကပ်မိရင် မခွာချင်လို့ ရွာရှောင်နေတာ ရွာပျက်တယ်ဆိုတော့ ပူထူသွားတာပဲ။
. လော်မြ ကို ဝင်ပြီး လော် ပေးသွားကြတာ ကျေးဇူးကြီးပါ။
ရွာက ပျက်တာ ၄ရက်၊ ကွန်ကပျက်တာ ၄ရက်။
၀မ်းသာရမလို (ငါ့တော့ ကျော်မတက်သွားသေးဘူးဆိုပြီး)
၀မ်းနည်းရမလို (ငူငူငေါင်ငေါင် အူကြောင်ကြောင်နဲ့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေလို့)
ရွာဒဲမှာ ဒီမိုအတု ယှိသဗြ… ဘာဒဲ့ ဗွားဒေါ်ပါတီ မဲအပြတ်နိုင်မှာ စန့်ကြင်ဆိုဘဲ…။ အင်းလေ သူကပဲ ကျောင်းဓါးဒပိတ်ကို စန့်ကြင်ဒါ အံ့ဆရာ မှုတ်တော့ ပါဖူး…
ဒီရွာထဲ မရောက်တာ လေးနှစ်ကျော်ပြီ။ ဒီရက်ပိုင်း အလုပ်က စာတွေ ဖတ်ရလွန်းလို့ ငြီးငွေ့လာတာနဲ့ စာပြန်ရေးဖို့ စိတ်ကူးပေါက်လို့ ဒီရွာထဲပြန်ဝင်ကြည့်တုန်း ဒီပို့စ်မြင်တာနဲ့ ရွာထဲ ပြန်ဝင်လာတယ်ဗျို့။ ကောင်းတယ် ဒေါ်မြရေ လော်ဘီချက်က မိုက်မှ မိုက်ပဲ။ ကျောင်းအမ စာထဲက စကားလိုပြန်ဆိုရရင် CHANGE …. We can BELIEVE in ပဲ ဝေ့